Kedu ihe mere m ga eji kwado njikarịcha nchọgharị m na weebụ na SEO video marketing?
Ọ na-ewekarị oge na ịrụ ọrụ iji hụ ọbụna ihe ịrịba ama mbụ nke SEO na-ebute ụzọ mbụ. Kedu otu esi eme ka enwewanye ọganihu? Ịkwesịrị itinye aka na njedebe ọchụchọ ọchụchọ gị na ụfọdụ atụmatụ iji mee ka ndị na-ege ntị n'ezie na ndị na-achọgharị crawlers chọọ. Ya mere, gịnị mere na ị gaghị anwale ụfọdụ atụmatụ SEO video marketing? O yiri ka nhazi zuru oke iji zoo ndị ahịa ndị ọzọ ka ị na-edebe na ịzụlite ụmụazụ gị ma ọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ, ọ bụghị ya? Ka o sina dị, ekwenyere m na ihe ndị na-esonụ gbasara iji SEO na ahịa vidiyo ga-aba uru maka ichebara echiche nke ọma.
Nweta ọnụọgụ ntọghata ka ukwuu
N'ụzọ dị ịtụnanya, ma ugbu a, YouTUbe aghọwo search engine kasị ewu ewu n'ụwa, na-esote Google, ya mere na-ahapụ ezigbo nkwado nke Bing na Yahoo. Kedu ihe ọ pụtara? O nweghị ihe ọ bụla, ma e wezụga eziokwu na ndị mmadụ na-achọ ikiri vidiyo. Ya mere, gịnị kpatara na ọ gaghị abụ echiche magburu onwe ya itinye akwụkwọ weebụ gị na ụfọdụ ọdịnaya vidiyo bara uru ma ọ bụ ụtọ? Ọ bụghị naanị maka ahụmịhe ọrụ njirimara, mana maka mgbanwe ka ukwuu. Dị ka atụmatụ nyocha kachasị na nso nso, ịmepụta mgbasa ozi email kwesịrị ekwesị, na-akwado na SEO ahịa vidiyo nwere ike ime ka ndị na-ege gị ntị nweta site na 51%. Ndị mmadụ na-ekwu na ịtinye peeji nke ọdịda gị na video vidio dịka ọ na-adịkwu mma karị, na-enwe ọganihu ugboro abụọ na ntụgharị. Dịka e kwuworo, ihe bụ isi ebumnuche nke Search Engine Optimization onwe ya bụ ịnọgide na-atụgharị ntụgharị, mgbe ị na-ebute ndu. Ọ bụ ya mere m ji enwere onwe m iji rịọ maka, ọ dịkarịa ala ụzọ bụ isi nke SEO video marketing maka afọ abụọ gara aga, ma gharakwa akwa ụta mgbe m na-eme.
Mee ka ọnụnọ n'ịntanetị siri ike
n'etiti SEO dị ogologo oge na-adịgide adịgide na-anọgide na-eme ka ike gị dị ike, na onye ahịa ịmara azụmahịa gị Ịntanetị. N'ụzọ dị otú ahụ, ịmekọrịta SEO video ahịa nwere ike inyere aka mee ka ọnọdụ gị ugbu a dịkwuo mkpa maka ọbụna karịa. Inwe ezigbo video ọdịnaya mara ndị na-ege ntị na-ekwu na gị na ebe nrụọrụ weebụ na-aghọ onye ndú n'ime gị ahịa niche, na-enye ndị ọzọ bara uru na mgbe niile dị mkpa ozi, yana ịza ọtụtụ ajụjụ ndị ọrụ. Ihe niile ga - eme ka ndị ọbịa gị oge ọbụla dịkarịa ala ghọọ ndị na-eso ụzọ, ha agaghị ekwu ezigbo ndị ahịa.
Hapụ ndị iro gị, kpoo ebe nrụọrụ weebụ gị na SEO video marketing
ndị na-azụ ahịa na-alụ ọgụ maka otu niches ma ọ bụ ndị a na-eleta anya, n'ihi ya, ị na-ekere òkè na otu ihe ahụ, ọ bụghị ikwu okwu yiri nke ahụ na ahịrịokwu ndị dị na ya. Ma ugbu a, mmetụta na-arịwanye elu nke ọdịnaya vidiyo na-eme ka ọ gosipụta na n'elu SERPs, aka na aka na ọdịnaya ederede mbụ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji hapụ ohere a magburu onwe ya ịkụ ndị iro gị ozugbo, ma ọ dịkarịa ala, ndị ka na-enweta n'enweghị SEO video marketing. Naanị gbanye oge na mgbalị maka ọdịnaya vidio na-akpali akpali na nke bara uru, ọ bụghị n'ihi na ozi ntanetị ahụ ma ọ bụ ozi data ị ga-aga n'izu a, dịka ọmụmaatụ Source .